YEYINTNGE(CANADA): Friday, February 14
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 2/14/20140အကြံပြုခြင်း
(၂၀၁၄) ကုန်တာနဲ့ မြန်မာတပြည်လုံးကသစ်ပင် တွေကုန်မှာ
(၂၀၁၄) ကုန်ရင် နိုင်ငံခြားသစ်မပို့ ရ ဆိုတဲ့ ဥပဒေမစခင်
ကိုကိုးကျွန်းကို ၁၉၉၄ ခုနှစ်ကတည်းက တရုတ်အစိုးရထံ အငှါးချထားပြီး ဖြစ်
ကိုကိုးကျွန်းကို ၁၉၉၄ ခုနှစ်ကတည်းက တရုတ်အစိုးရထံ အငှါးချထားပြီး ဖြစ်တယ်လို့ Wikipedia မှာ ရေးထားတာ ဖတ်ရပါတယ်...။
တကယ်တော့ ကိုကိုးကျွန်း ကိစ္စ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အစိုးရဘက်က တိတိကျကျ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိစွာ ပြောဆို တုံ့ပြန်တာတွေ မရှိပါဘူး...။ ပြောတော့ ပြောတယ်.. တိကျရေရာ သေချာမှု မရှိတဲ့ တုံ့ပြန်မှုတွေသာဖြစ်တယ်...။ သဘောက လေယာဉ်ကွင်း ဟာ မူလကတည်းက ရှိတယ်.. ဆိုရင်လည်း ရှိတယ်ပေါ့...။ မရှိဘူးဆိုရင်လည်း မရှိဘူးပေါ့...။ တရုတ်ကို ငှါးထားတယ်ဆိုရင်လည်း ငှါးထားတယ်ပေါ့...။ နှစ်ဘယ်လောက်ထိ ဘယ်လိုစာချုပ်ပါ အချက်အလက်တွေ နဲ့ ငှါးထားတယ်ပေါ့...။ အခုတော့ ဘာမှ သေချာမပြောပဲ ပြည်သူတွေကို ဘာမှချမပြပဲ “ဒါတွေဟာ အခြေအမြစ်မရှိတဲ့ သတင်းတွေပါ” ဆိုပြီး ပြန်ကြားရေး ဒုဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ် ပြောထားတာ ဖတ်ရပါတယ်...။
Wiki မှာ ဒီလိုရေးထားပါတယ်...
The Coco Islands are two islands in the northeastern Indian Ocean. They are part of Yangon Region of Burma. They are allegedly leased to the People's Republic of China since 1994. The governments of Burma and the People's Republic of China do not comment on this issue.
တကယ်တော့ အိန္ဒိယ သတင်းစာက အခုမှ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး..။ 2011 နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ကတည်းက တစ်ကြိမ်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ...။ သတိမထားမိကြလို့ပါ.....။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 2/14/20143အကြံပြုခြင်း
တိုးတိုးတိတ်တိတ် အေးအေးချမ်းချမ်း ဘုရားဖူးတဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး
● တိုးတိုးတိတ်တိတ် အေးအေးချမ်းချမ်း ဘုရားဖူးတဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ●
ပုဒ်မ (၅၉) စ လုံးကုို မပြင်နိုင်လျှင် စစ်ဗုိုလ် လူထွက် တစ်ယောက်ယောက် သာသမ္မတဖြစ်လာနိုင်
ပုဒ်မ (၅၉) စ လုံးကုို ပြင်ပေးပါ
တုိုင်ပြည်၊ လူမျိုး၊ အမျိုးဘာသာ၊ သာသနာကုို ချစ်မြတ်နိုးသောကြောင့် ပုဒ်မ(၅၉ )စ လုံးကုို ပြင်ဖုို့ သဘောတူပါသည်။။ (လွတ်လပ်စွာ သဘောကွဲနိုင်သည်)
ထုိုပုဒ်မကုို မပြင်နိုင်လျှင် ဘာဆက်လက်ဖြစ်မည်လဲ အနည်းငယ် စဉ်းစားကြည့်ပါစုို့။။။ ထုိုပုဒ်မ ဥပဒေကုို မပြင်နိုင်လျှင် စစ်တပ်အကြီးအကဲ (ဝါ) စစ်ဗုိုလ်လူထွက် တစ်ယောက်ယောက် သာလျှင် ၂၀၁၅ မှာ သမ္မတဖြစ်လာနိုင်သည်။။
၁။ ထုို့ကြောင့် တုိုင်းပြည်မှာ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေ ဆက်လက်နိမ့်ကျနေမည်၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး နိမ့်ကျလျှင် အကျိုးဆက်အားဖြင့် လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး စသည်များလည်း တောက်ပြောင်မည်မဟုတ်ပေ။။ မြန်မာအမျိုးသမီးများလည်း စီးပွားရေး နိမ့်ကျသောကြောင့် နိုင်ငံခြားသုို့ အလုပ်ကြမ်း၊ အိမ်အကူသွားနေရမည်၊ တရုတ်နိုင်ငံသုို့ ကြီးကြီး၊ ငယ်ငယ် ဆက်လက် မယားအဖြစ် ရောင်းစားခံနေရမည်။ ပြည်တွင်းမှာလဲ ပုိုက်ဆံချမ်းသာသော ဘာသာခြားကြီးများက ဆင်းရဲနိမ့်ကျသော ပညာရေ နိမ့်ကျသော မြန်မာမလေးများကုို ဆက်လက်သိမ်းပုိုက်နေမည်။။
၂။အရင်လုိုဘဲ လာဒ်စားမှုတွေ ဆက်လက်ဖြစ်နေမည်၊ ပုိုက်ဆံ အင်မတန်ပေါသော မူစလင်ဘာသာဝင်များဆီက ပိုက်ဆံများယူကာ ဗလီများ ဆောက်ခွင့်ပြုမည်၊ ဆက်လက်ဆောက်ခွင့်ပြုမည်၊ (ဥပမာ အောင်ဆန်းကွင်းက တစ်ခြမ်းပဲ့ ဗလီကုို သိန်း၅၀၀ယူကာ အောင်ဆန်းကွင်း တာဝန်ကျ ဗုိုလ်မှူးတစ်ယောက်က ပုိုမုိုကြီးမားအောင် လုပ်ဆောင်ခွင့်ပေးခဲ့သည်၊ မယုံလျှင် စုံစမ်းကြည့်ပါ) (မကြာခင်က ပြုတ်သွားသော သာသနာရေး ဝန်ကြီးသည်ပင် ပြုတ်သွားသော အခါ ရန်ကုန်မှာ အိမ်လေးလုံး၊ ကား ၁၄ စီး ပုိုင်သတဲ့၊၊၊ ဘယ်သူတွေ ဒါန ပြုသလဲမသိ) စီပွားရေးမှာလည်း ဗုိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ၊ အနည်းငယ်သော ခရုိုနီးများသာ ဆက်လက်လွှမ်းမုိုးထားမည်။ ဘာသာခြား ခရုိုနီကြီးများက နောက်ကွယ်ကနေနေပြီး ဗုိုလ်ချုပ်ကြီးသားများ၊ ဝန်ကြီးသားများကုို ရှေ့ထုတ်ကာ စီးပွားရေးများကုို သိမ်းပုိုက်ထားမည်၊၊၊
၃။ ဥပဒေ စုိုးမိုးမှု ဆက်လက် အားနည်းနေမည်၊ ထုို့ကြောင့် ဘာသာရေး အသွင်ဆောင်သော ပဋိပက္ခများ ဆက်လက်ဖြစ်မည်၊ မြေယာသိမ်းမှု၊ ကျူးကျော်မှု စသည့်စသည့် ပဋိပက္ခမြောက်များစွာဆက်လက်ဖြစ်နေမည်။။ နိုင်ငံခြား ရင်နှီးမြှုပ်နံမှုများ ထင်သလောက်မလာပေ၊ နိုင်ငံခြား အကူအညီများကလည်း ဒီကောင်တွေဘဲ ယုံနိုင်စရာမရှိဟု ဆုိုကာ ပေးသင့်ပေးမည်မဟုတ်ပေ၊ ရသင့်သလောက် မရပေ၊၊၊ ( အနည်းငယ်မျှကုိုသာ တင်ပြခြင်းပါ)
ပုဒ်မ (၅၉ ) စ လုံးကုို ပြင်လုိုက်လျှင် ပြည်သူက ရွေးချယ်တဲ့ သမ္မတ တစ်ယောက်ရလာနိုင်သည်။။
၁။ ပြည်သူစိတ်ကြိုက်ရွေးထားတာဖြစ်လုို့ မကြိုက်လျှင် အချိန်မရွေး ဖြုတ်ချနိုင်သည်။ ထုိုသမ္မတ ဘာသာတစ်ခုခု၊ လူမျိုးတစုကာကွယ်ပြီး မျက်နှာလုိုက်လျှင် ချက်ချင်းဖြုတ်ချနိုင်သည်။ မိမိကုိုးကွယ်ရာဘာသာတရားလည်း ပုိုမုိုထွန်းတောက်ပြောင်နိုင်မည်။။
၂။ အစုိုးရအတွင်းမှာ လာဒ်စားမှု ဖြစ်ပေါ်ပါက ပြည်သူက စိတ်ကြိုက်ရွးထားတာဖြစ်လုို့ ချက်ချင်း နှုတ်ထွက်ခုိုင်းနိုင်သည်၊ ဝန်ကြီးများဆဲလျှင်လည်း ထုိုသမ္မတတာဝန်ယူနိုင်ရမည်။။
၃။ ပြည်သူက ရွေးထားတဲ့ သမ္မတအုပ်ချုပ်သောကြောင့် နိုင်ငံတကာ ပုိုမုိုယုံကြည်လာမည်၊ အကူအညီပုိုရမည်၊ စီပွားရေးတွေ ပုိုလာလုပ်လာမည်၊ ဒါ့ကြောင့် လူတွေ အလုပ်အကုိုင်ရလာနိုင်သည်၊ ဝင်ငွေတွေ တုိုးလာနိုင်သည်၊ စီပွားရေး ကောင်းလာနိုင်မည်၊ပြည်ပရောက် မြန်မာ နယ်ပေါင်းစုံက ပညာရှင်တွေ ပြန်လာနိုင်သည်၊ နိုင်ငံတကာက ယုံကြည်လာသောကြောင့် ဘယ်သူက မမှန်သတင်းလွှင့်လွှင့် ထုိုသမ္မတ ရှင်းပြလုိုက်လျှင် နိုင်ငံတကာလက်ခံလာမည်၊ ( ဘင်္ဂါလီ ၄၀ ကုို မသတ်ပါဘဲ သတ်ပါတယ်ဟု သတင်းလွှင့်တာကုို မဟုတ်ကြောင်း ဝန်ကြီးတွေ ရှင်ပြတာကုို နိုင်ငံတကာက မယုံတာကုို သဘောပေါက်)
၄။။ ပြည်သူက စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ခွင့်ရလုို့ ရွေးထားလျှင် ထုိုသမ္မတ ဘယ်သူ့ကုို သစ္စာခံလုို့မရ၊ ပြည်သူကုိုသာလျှင် သစ္စာခံရမည်၊ ပြည်သူကုို သစ္စာမခံလျှင်၊ ပြည်သူကုို လိမ်လျှင် ထုိုသမ္မတကုို ချက်ချင်း ဖြုတ်ချနိုင်သည်၊၊ (အနည်းငယ်သာ တင်ပြချင်ပါ။။ နားမလည်သူများရှိပါက အကျယ်ဆွေးနွေးမည်)))
မိဘပြည်သူများခင်မျာ ကုိုယ့်ကံကြမ္မာကုိုယ်တုိုင် မဖန်တီးချင်ဘူးလား၊၊၊ ဖန်တီးချင်တယ်ဆုိုလျှင်--------------
မှတ်ချက်။။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ သမ္မတဟုဆုိုလျှင် ထုိုသမ္မတဖွဲ့စီးထားသော အဖွဲ့အစည်းအကုန်လုံးကုို ဆုိုလုိုသည်။။
“NLD ပါတီကို မဲဆွယ်ဖို့ လုံးဝမပြောခဲ့ဘူး။ NLD ဆိုတဲ့ စကားလုံးလည်း တလုံးမှ မသုံးခဲ့ဘူး။ ( ဦးဘုန်း (ဓာတု) )
“NLD ပါတီကို မဲဆွယ်ဖို့ လုံးဝမပြောခဲ့ဘူး။ NLD ဆိုတဲ့ စကားလုံးလည်း တလုံးမှ မသုံးခဲ့ဘူး။ ကျနော်ပြောခဲ့တာက အကျင့် သီလ ကောင်းတဲ့သူ အသိဉာဏ် ရှိတဲ့ သူကို အားကိုးဖို့၊ အဲဒီလို လူမျိုးတွေ တိုင်းပြည်ကို ဦးဆောင်မှ တိုင်းပြည် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မယ် ဆိုပြီး ဟောခဲ့တာ။ ကြည့်ရတာ အမှန်တရားတွေ ပြောလို့ ထင်ပါတယ်”
အမေစုဟောပြောမယ့်ဒုတိယအကြိမ် ဧရာဝတီစာပေပွဲတော်ကို မန္တလေး ကုသိုလ်တော်ဘုရားဝင်း အတွင်း ကျင်းပခွင့် မပြု
၁၄ ရက်နေ့မှာ လုပ်မယ့်ပွဲကို ၁၄ ရက်နေ့မှာမှ စာရောက်တယ် ။ နိုင်ငံတကာ လာကြတဲ့ စာရေးဆရာများကိုပင် အားမနာ ။ ပွဲ စီစဉ်ခင်းကျင်းသူများမှာ အစအဆုံးပြန်လုပ်ရရှာ ။
"သံဃာများကို တပ်မတော်က စစ်သင်တန်းပေးခြင်းမရှိဟု ဦးရဲထွဋ်ငြင်းဆို"
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ကချင် လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ ကေအိုင်အိုနှင့် မြန်မာ့ တပ်မတော်တို့ ထိစပ်နေသည့် ဒေသများတွင် ရဟန်းသံဃာများကို စစ်သင်တန်း ပေးနေသည် ဆိုခြင်းမှာ မဟုတ်မှန်ဘဲ မြန်မာ့တပ်မတော်က ရဟန်းသံဃာများကို စစ်သင်တန်းပေးခြင်း လုံးဝ မရှိကြောင်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်က ငြင်းဆိုသည်။
သံဃာတော် သုံးပါးကို မြန်မာ့ တပ်မတော်က စစ်သင်တန်း ပို့ချနေသည်ဆိုသည့် မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံတစ်ခု လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာတွင် ပျံ့နှံ့နေသည့်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ The Voice ၏ ဆက်သွယ် မေးမြန်းမှုကို သမ္မတ၏ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူလည်းဖြစ်သည့် ၎င်းက ယင်းသို့ ပြောဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။
တာလောကြီးဒေသရှိ ရှမ်းရွာများတွင် ရွာသူရွာသားများကို ပြည်သူ့စစ်က သင်တန်း ပို့ချနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ဓာတ်ပုံပါ သံဃာတော်များမှာ အနီးရှိ ကျေးရွာများမှ သံဃာအချို့ အပျော်သဘော ဝင်ရောက် ပစ်ခတ်သည်ကို မှတ်တမ်း တင်ထားခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ တပ်မတော်အနေနှင့် သံဃာများကို စစ်သင်တန်းပေးခြင်း မရှိကြောင်း ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနထံမှ သိရသည်။
“ရှမ်းရွာတွေဆိုတော့ ကေအိုင်အေက တပ်သား စုဆောင်းတာတွေ ရှိလို့ ပြည်သူ့စစ် သင်တန်းပေးတာပါ။ နောင်မှာ ဒီလို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု ကိုင်တွယ်တာတွေ ခွင့်မပြုဖို့လည်း စိစစ်ကြပ်မတ်သွားမှာပါ” ဟု ဦးရဲထွဋ်က ပြောဆိုသည်။
သဲကုန်းမြို့ ရွှေဘုန်းရှင်လမ်းပေါ်က လယ်သိမ်းခံ လယ်သမားတွေရဲ့ သပိတ်စခန်းကို ရဲတပ်ဖွဲ့ က အင်အားသုံးဖြိုခွင်း ခဲ့တဲ့အတွက် သပိတ်စခန်းက အမျိုးသမီး ၂ ဦး ဒဏ်ရာ ရရှိသွားပါတယ်။
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ-၂ သူရဦးအေးမြင့် ဗိုက်ကြီးကို လှန်ပြကာ ဟောပြော
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ-၂ သူရဦးအေးမြင့်၂၈-၁၁-၂၀၁၃ နေ့က မင်းကင်းမြို့နယ်က ပြည်သူ လူထုတွေ ကို....
"" ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုတော့ ချစ်ကြောင်း၊ ဒါပေမဲ့ ဒေါ်စုကိုတော့ မဲပေးဖို့ မလိုကြောင်း၊ ဒေါ်စု မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် မြက်တစ်ပင်မှ စိုက်ခဲ့သူ မဟုတ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံခြားသားကိုယူပြီး သူ့သားတွေ ကလည်း နိုင်ငံခြား မှာ နေသူတွေ ဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၁၅ မှာ ဒေါ်စုနဲ့ ယှဉ်မယ်ဆိုရင်လည်း ယှဉ်ပြိုင်ရဲကြောင်း၊ ဒေါ်စုသည် စစ်တိုက်ဖူးသူ မဟုတ်ကြောင်း ယခုတွေ့ဆုံပွဲမှာ အရှင်လတ်လတ်ကြီး ဟောပြောနေသူ သူရဲကောင်းကြီးသည် စစ်တိုက်ခဲ့ရာမှာ ဗိုက်ကို ကျည်ဆန်မှန်ခဲ့လို့ သူရဘွဲ့ထူးကို ဆွတ်ခူးခဲ့သူဖြစ်ကြောင်း၊ ဗိုက်ကြီးကို လှန်ပြကာ ဟောပြောသွားခဲ့ . . .""
ဓါတ်ပုံ - လွှတ်တော် ၃နှစ်ပြည့် နေ့လည်စာစားပွဲတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား သူရဦးအေးမြင့် ၊ ဦးအောင်သောင်း ၊ ဦးသိန်းဇော် ၊ ဦးဌေးဦး တို့နှင့် အတူ တွေ့ရစဉ်
မြက်တော့ ကိုယ်တိုင်မစိုက်ဖူးပါ ။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံတကာက တပ်တွေနဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော် မြက်အတူ စားဖူးအောင်တော့ လုံးပန်းပေးရှာပါတယ် ။ အဲသည်လို လုံးပန်းပေးရာမှာလဲ တိုင်းရင်းသားအများစုရဲ့ အပြစ်တင်ခြင်းကို ခံရပါတယ် ။ မုဒိမ်းတပ် သူခိုးတပ် ဓါးပြတပ်ကို Capacity Building လုပ်ပေးဖို့ ဒေါ်စုက လော်ဆော်ရသလား ဆိုပြီးတော့ ။ ပါးရိုက်တာရယ် ၊ နို့သောက်တာရယ် ၊ လှန်ပြတာတွေရယ် ပေါင်းရေးလိုက်ရင်တော့ မှုးဇော် ကြိုက်တဲ့ အေ၇ာင်စာမျက်နှာ တစ်ရွတ်ရလောက်တယ်
အမျိုးသား ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးနဲ့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး အောက်ဆွဲနည်းလမ်းများ
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပဋိပက္ခများကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးစကားလုံးကို ပြပါဆိုရင် အမျိုးသား ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးနဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့ စကားသာ ရှိတယ် ။ အနက်အဓိပ္ပယ် ဖွင့်လာတဲ့ အခါကျတော့ အပေးအယူနည်းလမ်းတို့ နဲ့အောက်ဆွဲနည်းလမ်းတွေ အသုံးပြုကြတတ်တယ် ။ သူ့ လူကိုယ်ဖက်သား ဖြစ်အောင်နဲ့တပည့်ခံအောက်ဖက် ကျရောက်သွားစေအောင် ပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းတွေ အသုံးပြုကြတယ် ။
ဒီအခါမျိုးမှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေကြား ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်သွားအောင် လူမလေး မခန့် စကားလုံးတွေ ပစ်သွင်းပြီး ဗဟိုချက်မကို ယိုင်လဲစေအောင် ပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းတွေကို အသုံးပြုလာကြတယ် ။ ဘယ်သူက ဘာကောင်မို့ လို့ လဲ ဆိုပြီး တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအချင်းချင်းကြားထဲမှာ အားမနာပ သွေးထိုးစကားနဲ့ပြောလာတာကြားရတယ် ။ သိပ်ကိုအံ့ သြမိတာက ဒါတွေဟာ အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးနဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကို ဇေါင်းပေးနေရမဲ့ အချိန်မှာ ထွက်ပေါ်နေတာမို့သံယသမျက်လုံးနဲ့တိုင်းတာရတော့မဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ် ။
ခိုင်မာပြတ်သားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့တော်လှန်ရေးသမားတွေဟာ ဒီအချက်ကို လုံးဝဥသုံ သတိထားတယ် ဆိုတာ နားမလည်ကြလို့ သာ ပြောဆိုသုံးနုံးတာတာလို့ ယူဆတယ် ။ မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အဓိက တာဝန်အရှိဆုံးသူဟာ မြန်မာ့တပ်မတော်ဖြစ်တယ် ။ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးစစ်ဦးစီးချုပ်ကသာ ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်တယ် ။ အခြားမည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကမှ ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်း မရှိဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ပြတ်ပြတ်သားသား ခွဲခြားနားလည်တယ် ။
ခုအချိ်န်မှာ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးဆောင် အဖွဲ့ရှိနေပေမဲ့နောင်တစ်ချိန် အစိုးရပြောင်းလဲသွားရင် အဲဒီအဖွဲ့ က ရှိချင်မှ ရှိနေပေလိမ့်မယ် ။ ဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ကြားဝင်စေ့စပ်ရေးအဖွဲ့ ကတော့ နောက်တက်လာတဲ့ အစိုးရရဲ့ဖွဲ့ စည်းမှုအောက်ကနေပြီး လူပြောင်း မူပြောင်း သွားကြမှာဆိုတာကိုတော့ ယုံကြည်ပြီးသားဖြစ်တယ် ။ သို့ အတူဘဲ လက်ရှိသမ္မတအကြံပေးများအဖွဲ့ ဟာလဲ ဒီကနေ့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကို အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေကြသော်လဲ -၂၀၁၅-ခုနှစ် သမ္မတ တစ်ယောက်ပြောင်းလဲလာခဲ့ ရင် အကြံ့ပေးပုဂ္ဂိုလ်တွေကပါ ပြောင်းလဲကုန်ကြမှာဖြစ်တယ် ။ ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်းက ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးတွေလဲ နောက်အစိုးရ တက်လာတဲ့ အခါ ပြောင်းလဲသွားမှာပါဘဲလို့နယူးယောက်မြို့ မှာ ပြောသွားသေးတယ် ။
မပြောင်းလဲတာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေး မရရှိလို့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရအုံးမှာဘဲ ဆိုတာဘဲဖြစ်တယ် ။ ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ လိုချင်နေတာဟာ စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီအနှစ်သာရကို ဖြစ်တယ် ။ သမ္မတအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို လိုလားသူများဖြစ်တယ် ။ ဒါပေမဲ့စစ်မှန်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံတော်ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံနဲ့အညီ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တယားနဲ့ဖြစ်နေတဲ့စနစ်ကို လိုလားသူများဖြစ်တယ် ။ ဒါပေမဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စနစ်က စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးမဟာ ဗျူရိုက ရှိနေပြီးသားဖြစ်တယ် ။ ဒီတော့ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဟာ ခုချိန်ထိ လွပ်လွပ်သော ဒီမိုကရေစီအနှစ်သာရနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်စေဖို့အလှမ်းဝေးနေသေးတယ်ဆိုတာ ယုံကြည်တယ် ။
၂၀၀၈- နိုင်ငံတော်ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံဟာ တကယ်တော့ စစ်တပ်နောက်ခံအားပြုထားတဲ့ဥပဒေဖြစ်တယ် ဆိုတာ လူတိုင်းသိတယ် ။ UNFC-လို့ခေါ်တဲ့ပြည်ပ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ များက ဒီ-၂၀၀၈-ခုနှစ် ဖွဲ့ စည်အုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းပြီး အသစ်ပြန်ရေးဆွဲမယ် လို့ကြေညာထားပြီးသားဖြစ်တယ် ။ နောက်တက်လာတဲ့အစိုးရကလဲဘဲ -၂၀၁၅-ခုနှစ်မှာ ဒီ-၂၀၀၈-ခုနှစ် ဖွဲ့ စည်းပုံကို ပြင်ဆင်ပြီး အုပ်ချုပ်ရေးန္တယားကို ဆက်လက် အကောင်းအထည် ဖေါ်ဆောင်နေရင်တောင် လက်မခံဘဲ နေကြမှာဖြစ်တယ် ။
ဒီလိုဆိုရင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များအဖွဲ့ -UNFC-ရဲ့မူဝါဒနဲ့မကိုက်ညီတဲ့ အတွက် နောက်တက်လာမဲ့ အစိုးရကို ဖွဲ့ စည်းပုံနဲ့ပါတ်သက်လို့အသစ်ပြန်လည်ရေးဆွဲမှ အပစ်အခပ် ရပ်စဲရေးစာချုပ်နဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေ လုပ်ဖြစ်မယ်လို့ ဆိုလာရင် မြန်မာနိုင်ငံဟာ ပြည်တွင်းရေးငြိမ်းချမ်းရေးကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ မှ ဆောင်ရွက်လာနိုင်မှာ မဟုတ်တော့ဘူးလို့ထင်မြင်တယ် ။ မပြီးသေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးဟာ ဖွဲ့ စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးကြောင့်ဖြစ်တယ် ။ ဒီပြည်တွင်းစစ်ကြီး ငြိမ်းချမ်းဖို့ဖွဲ့ စည်းပုံအသစ်တစ်ခုကို ရေးဆွဲရမှာသာ ဖြစ်တယ် ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမှ မဟုတ်ဘဲ ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် သမ္မတဖြစ်စေ နိုင်သော အချက်များအနေနဲ့-၅၉-စ-ဥပဒေကို ပြင်ဆင်မယ် ဆိုရင်လဲ -UNFC-ဟာ လက်မခံဘဲ ပယ်ချနေမယ် ဆိုတာ သူတို့ ရဲ့မူဝါဒကို တိကျစွာ ကြေညာထားပြီးသား ဖြစ်တယ် ။ ဘာဖြစ်လို့ လဲ ဆိုတော့ -UNFC-က ဒီဖွဲ့ စည်းပုံကို မျက်နာဖုံးကနေ ပြင်ဆင်အသစ်ရေးရမယ်လို့ပြတ်ပြတ်သားသား ကြေညာထားလို့ ဘဲဖြစ်တယ် ။ ဒီတော့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဟာ အလှမ်းကွာဝေးနေမယ် ဆိုတာ ပြောလို့ ရတယ် ။
ဒီလိုမျိုးပြသနာတွေကို သမ္မတအကြံပေးတွေက သမ္မတကို ပေးကြဖို့ လိုတယ် ။ မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့အကြံညဏ်ကို ပေးမှ သမ္မတက ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်တယ် ။ ပြည်သူများကို စိတ်ပျက်စေမဲ့အပြောအဆိုများနဲ့အကြံ့ပေးစကားပြောနေကြမယ် ဆိုရင် သိက္ခကျ ဝေဖန်ခံနေရအုံးမှာဖြစ်တယ် ။ ကျွန်တော်တို့မမြင်ချင်အဆုံးဖြစ်နေတဲ့သမ္မတအကြံပေးတွေရဲ့စကားတွေ-လက္ခဏာတွေဟာ ခုတော့ ပြည်သူ့ ချဉ်ဘတ်ဘ၀ကို မီဒီယာ ကွန်ယက်တွေမှာ တွေ့ မြင်လာရတယ် ။
ကျွန်တော်တို့ က ခုလိုအကြံပေးတင်ပြနေတာတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အဓွန့် ရှည် သာသနာတော်တည်တန့် ရေးကို ဖြစ်စေချင်လို့ ဘဲဖြစ်တယ် ။ ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရဖြစ်ချင်ရင် ကောင်းမွန်သော အကြံပေးခြင်းများကို လက်ခံယူရမှာဖြစ်တယ် ။ အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးနဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကို တည်ဆောက်ရာမှာ ဘယ်သူမဆို အောက်ဆွဲ နည်းလမ်းများကို အသုံးမပြုဖို့ လိုတယ် ။ အထူးသဖြင့် အတိုက်အခံများဆီက သဘာထားများဟာ ဘယ်လောက်အထိ လက်ရှိအစိုးအပေါ် အကောင်းမြင် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိနေသလဲ ဆိုတဲ့ပေတံနဲ့တိုင်းတာကြည့်ဖို့ လိုတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ ဟာ လွှတ်တော်ထဲကို ရောက်နေတဲ့-၂၀၀၈-ခုနှစ် နိုင်ငံတော် ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကို ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုနေတဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်သလို ယုံလဲ မယုံကြည်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ် ။
ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ သူများဆီက အကြံကောင်းညဏ်ကောင်းများ ပေးနေတာကို လက်မခံဘဲနေကြအုံးမယ် ဆိုရင် အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးကို ထိခိုက်သွားမဲ့စကားလုံးများနဲ့အောက်ဆွဲနည်းလမ်းများကို အသုံးပြုနေမယ် ဆိုရင် သံသယဆိုတာ အမြဲတမ်းရှိနေကြမှာဖြစ်တယ် ။ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရမှာ ခုချိန်ထိ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များအဖွဲ -UNFC-ဟာ အတိုက်အခံဖြစ်နေသလို နိုင်ငံရေးသမားတွေကလဲဘဲ -UNFC- ကို ထောက်ခံထားသူများဖြစ်တယ် ။ ကျွန်တော်တို့ ဟာ ဘာကောင်လဲ ဆိုတာထက် မိမိတို့ ကိုယ်ကို မိမိတို့ဘာကောင်လဲ ဆိုတာကို သိထားကြဖို့ ဘဲ အရေးကြီးတယ် ။
ဒါ့ကြောင့်မို့ လို့ အဲဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးနဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာတွေရဲ့အောက်ဆွဲနည်းလမ်းကို သုံးနေကြရင် သိပ်ပြီးတော့ အလှမ်းကွာဝေးနေမှာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကို တိတိကျကျ ပြောလိုက်ပါတယ် ။
ကိုကိုးကျွန်းကို ၁၉၉၄ ခုနှစ်ကတည်းက တရုတ်အစိုးရထံ အ...
တိုးတိုးတိတ်တိတ် အေးအေးချမ်းချမ်း ဘုရားဖူးတဲ့ နိုင...
ပုဒ်မ (၅၉) စ လုံးကုို မပြင်နိုင်လျှင် စစ်ဗုိုလ် ...
“NLD ပါတီကို မဲဆွယ်ဖို့ လုံးဝမပြောခဲ့ဘူး။ NLD ဆိုတ...
အမေစုဟောပြောမယ့်ဒုတိယအကြိမ် ဧရာဝတီစာပေပွဲတော်ကို မ...
"သံဃာများကို တပ်မတော်က စစ်သင်တန်းပေးခြင်းမရှိဟု ဦ...
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ-၂ သူရဦးအေးမြင့် ဗိုက်ြ...
အမျိုးသား ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးနဲ့ ပြည်တွင်းငြိမ်းခ...